Iindaba - Malunga neBaolai
I-Zhejiang Baolai Group Co., Ltd.yinkampani enkulu yabucala yokudibanisa iiglasi zokuvelisa, uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nokungenisa kunye nokuthumela iimpahla. Inkampani yethu ineefektri ezintathu kwiindawo eziphezulu zosapho, iivenkile ezi-2 phakathi kwidolophu yorhwebo esembindini, inkampani yorhwebo lwangaphandle, kunye namaqonga aphambili okuthengisa amaqela asezantsi. Iminyaka eli-19 yamava kwimizi yokuvelisa iiglasi, sidibanise phantse ikhulu leziglasi zeefektri kunye nezinto zeefektri zokusebenzisana. Umzi-mveliso useLinhai, Taizhou, Zhejiang, esona siseko sikhulu sokwenza imveliso kweli lizwe. Ivenkile kunye nenkampani yorhwebo lwangaphandle ikwindawo yokuhambisa imveliso encinci encinci-i-Yiwu, China. Abona baxhasi baphambili kumazwe aphesheya inkampani yethu esebenzisana nabo ibandakanya: Coca-Cola, Unilever, Wal-Mart, Disney, Lipton, Ford, njl. Inkampani ithatha ukuveliswa kwetekhnoloji njengesikhokelo, ubuchule njengomgaqo-nkqubo, kunye nezixhobo ezahlukeneyo zorhwebo lwangaphandle njengoncedo. Kwaye inenzuzo yexabiso ngokubambisana neefektri ezingama-600 kwishishini elinye, zidityaniswe nesebe lethu lokuhlola amaxwebhu, ukubonelela abathengi behlabathi ngemveliso ezinzileyo, ekhokelela kushishino ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso afanelekileyo.
Inkampani ihlala ihambelana "nokujolisa ebantwini" kwaye ihlonipha wonke umntu ozimeleyo, kubandakanya abathengi, abasebenzi, amaqabane, abathengisi kunye namaqela ezentlalo. Ngokusekwe "kukunyaniseka" kunye "nokuthembela" ukulungiselela injongo, silandela ukugqwesa, sihlala siphucula kunye nokwenza izinto ezintsha, kwaye sihlala sisebenza nzima ukonwaba kobuqu babasebenzi benkampani kunye nomdla wabathengi nabathengisi.
Ngokusekwe kwinjongo yokwakha uphawu lweshishini olukhulu, sinokuzithemba ukuya esidlangalaleni kwisithuba seminyaka emi-5, kwaye sinyanzelise kuphuhliso oluzinzileyo nolwexesha elide. Kwangelo xesha, sithembele kubasebenzi abomeleleyo, kulawulo olungqongqo lwemveliso nakwifilosofi yeshishini, ngokuqokelelwa kwamava ethu kunye nokusukela okungapheliyo kunye nokuphuculwa kwekamva, Ukuzibophelela ekubeni yinkokeli kushishino olubonakalayo eTshayina nakwihlabathi !